Suuqgeynta Mobaylka: Ku wad Iibintaada 5taan Xeeladood | Martech Zone
Dhamaadka sanadkan, in ka badan 80% dadka waaweyn ee Mareykanka ah waxay yeelan doonaan taleefan casri ah. Qalabka moobiilku wuxuu xukumaa labada B2B iyo B2C isticmaalkooduna xukumo suuq geynta. Wax kasta oo aan hadda sameyno waxay leeyihiin qeyb mobiil ah oo aan ku darno xeeladaha suuqgeynta.
Waa maxay Suuqgeynta Mobilka
Suuqgeynta moobiilka ayaa ku suuqgeynaya ama ku shaqeynaya aaladda mobilada, sida telefoonka casriga ah. Suuqgeynta moobiilku waxay macaamiisha siin kartaa waqti iyo goob xasaasi ah, shaqsiyeed, iyo aragti firaaqeyn muuqaal leh oo dhiirrigelisa alaabada, adeegyada iyo fikradaha.
Tiknoolajiyada suuqgeynta moobiilka waxaa ka mid ah farriinta qoraalka (SMS), daalacashada mobilada, emaylka gacanta, lacagaha moobilka, xayeysiinta moobilka, ganacsiga mobilada, teknoolojiyada guji-wicitaanka, iyo barnaamijyada moobilka Suuqgeynta bulshada ayaa sidoo kale xukunta muuqaalka suuqgeynta moobiilka.
Haddii aanad qiimayn kanaga marketing mobile istaraatiijiyado, Eliv8 wuxuu soo saaray macluumaadkan fudud ee xoogga leh ee ku saabsan halka aad (iyo waa inaad) kaxeyn karto iibka dadaalkaaga suuqgeynta moobiilka:
Ka dhig wicitaanka mid fudud - Laga soo bilaabo codsiyada riix-ka-wac wac isku xirnaanta la hagaajiyay.
Bixinta Hubinta - U adeegso Yelp, Facebook, Foursquare (Swarm) si aad ugu biiriso dalabyada dadka soo galaya oo daacad u ah goobta tafaariiqdaada.
Ololayaasha qoraalka iyo qoraalka - Ma jiraan wax waqti ku habboon oo waxtar leh u leh macaamiisha customers 8 jeer ka waxtar badan emaylka marka xeeladahaaga SMS la hagaajiyo.
Sanduuqa Mobaylka In ka badan kalabar emayllada oo dhan waxaa lagu akhriyaa (oo la tirtiraa) qalabka moobiilka. Hubinta emayllada ayaa ka jawaabaya mobilada qalabka waa waajib.
Mobile-Koowaad - Qaado istaraatiijiyad moobil ugu horreysa. Ku dhowaad kalabar dadka oo dhan uma badna inay ku soo noqdaan bartaada haddii aysan ku shaqeyn qalabka gacanta.
Waxay bixiyeen xog taageero iyo talobixin weyn oo kaa caawineysa inaad hirgeliso istaraatiijiyaddan suuqgeynta moobiilka:
Tags: Is xaadiriGuji si aad u wacdofacebook maxaliga ahafar geesoodlambarka taleefanka ee hyperlinkmobilada marka horesanduuqa moobilkamarketing mobileistaraatijiyad suuq geynta mobiladataleefannada gacantaemaylka jawaabta lehraxanYelp